युके भन्सार | मेरो कार आयात
सीमा शुल्क आयात शुल्क युके र भ्याट जब युकेमा सवारी साधन आयात गर्दछ
कुनै पनि वाहन कि बेलायत मा आयात गरीरहेको छ भन्सार को माध्यम बाट खाली गर्न आवश्यक छ
यूके भन्सार संग काम गर्ने दशकौं को अनुभव संग, मेरो कार आयात भन्सार निकासी मा विशेषज्ञ बनिसकेको छ, प्रक्रिया को माध्यम बाट यिनीहरु यूरोप भित्र वा बाहिर आए वा यातायात को प्रकार बाहेक सफा गरीरहेछन्।
युरोप बाहिर कुनै पनि आयातका लागि, हाम्रो भन्सार ह्यान्डलिंगमा HMRC NOVA प्रणाली प्रशासन पनि सामेल छ। युरोप भित्र कुनै पनि आयात को लागी, हामी पनि HMRC लाई मद्दत गर्छौं र तिनीहरूलाई आगमनको सूचना दिन्छौं, ताकि DVLA का लागि NOVA सन्दर्भ प्राप्त गर्न सकौं।
तपाइँको तर्फबाट प्रक्रियाको साथ कार कार विशेषज्ञको प्रयोगले सुनिश्चित गर्दछ कि कुनै पनि गल्तीहरू अनुकूलन क्लियरेन्स प्रक्रियाहरूको विविधतासँग सम्बन्धित छैन जुन फरक कारहरूमा लागू हुन्छ, उमेर, निर्माणको स्थान, वाहनको प्रकार, स्वामित्व र अधिकमा निर्भर रहन्छ।
हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको आयात र भन्सार हटाउने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सकेसम्म सजिलो बनाउनु हो।
के तपाई निजी रुपमा तपाईको गाडी आयात गर्दै हुनुहुन्छ?
निजी आयातका लागि सवारी साधन आयात प्रायः 'निजी आयात' को रूपमा संदर्भ गरिन्छ। हामी तपाईंको सवारी साधन आयात गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्दछौं र माथि वर्णन गरिए अनुसार हामी तपाईंको गाडीलाई युनाइटेड किंगडममा 'खाली' गर्ने प्रक्रियाको प्रबन्ध गर्दछौं।
एक निजी आयात बेलायत मा प्रवेश मा कर र शुल्क लागू हुनेछ। यदि तपाइँ TOR (रेसिडेन्सी को स्थानान्तरण) योजना को माध्यम बाट कर राहत को लागी आवेदन दिईरहनु भएको छ भने यो एक निजी आयात को रूप मा मानिदैन।
हामी निजी रूपमा तपाईंको सवारी साधन आयात गर्न र कुनै सम्भावित करको स्पष्टीकरणको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं।
के तपाईं व्यावसायिक रूपमा आफ्नो वाहन आयात गर्दै हुनुहुन्छ?
वाणिज्य प्रयोगको लागि सवारी साधनको आयातको लागि सबै समान नियमहरू VAT नम्बर बाहेक तपाईंले VAT फिर्ता दावी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
कर भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया वाणिज्यिक सवारीका लागि अलिक फरक हुन्छ तर हामी तपाईंलाई कुनै पनि प्रश्नहरूको साथ सहयोग गर्न छौं।
यदि तपाईं यसलाई पछि दर्ता गर्न आवश्यक भएमा हामी प्रक्रियाको त्यो भागका लागि पनि सहयोग गर्न सक्दछौं।
के तपाइँ अस्थायी रूपमा तपाइँको गाडी आयात गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ?
यदि तपाईं युनाइटेड किंगडममा छोटो अवधिको लागि आफ्नो वाहन प्रयोग गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने यो बेलायतमा स्थायी रूपमा दर्ता हुनु आवश्यक पर्दैन।
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, यदि वाहन केवल छ महिनाको लागि बेलायतमा जान्छ भने, यो अस्थायी रूपमा आयात गर्न सकिन्छ।
तपाईंको सवारी साधन बिमा गर्न आवश्यक पर्दछ।
केहि अवस्थाहरूमा, तपाईले यसलाई आफ्नो नम्बर प्लेटमा बीमा गर्न सक्नुहुनेछ तर केहि सवारी साधनहरूको लागि, तिनीहरूलाई VIN मा बीमा गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
के हामी भन्सार निकासी पोर्टबाट संग्रह प्रस्ताव गर्छौं?
शिपिंग एजेन्टहरू जस्तो नभई हामी एक पूर्ण सेवा वाहन आयात गर्दैछौं जसको मतलब हामीले तपाईको सवारी एक पटक युनाइटेड किंगडममा आयो भने हामी प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्नेछौं।
यदि तपाइँ होशियार हुनुहुन्न भने तपाइँको वाहन बन्दरगाह मा फस्न सक्छ जुन वास्तव मा तपाइँ लाई यसको लायक भन्दा बढी लागत लाग्न सक्छ। हामी बन्दरगाहहरु बाट नियमित रूप बाट सवारी साधनहरु स collect्कलन र प्रक्रिया संग परिचित छौं।
निवासीहरू हस्तान्तरण गर्नका लागि थप जानकारी:
अस्ट्रेलियाबाट कार पठाउन कति खर्च लाग्छ?
तपाईको गाडी प्याकिंग गर्दैछ?
TOR फारम के हो?
निवास युके स्थानान्तरण भनेको के हो?